Izindaba - Imakethe yama-valve embonini isesimweni esihle kwikota yesine
Imakethe ye-valve yezimboni isesimweni esihle kwikota yesine
Ezingxenyeni ezintathu zokuqala zonyaka we-2016, umnotho wezwe uqhubekile nokukhula ngokushesha, ngezinga lokukhula kwe-GDP elingu-11.5%, okunikeze imakethe ye-valve valve umkhuba omuhle. Kodwa-ke, umkhuba wokushisa ngokweqile komnotho uyaqhubeka, futhi kunezinkinga ezithile ezivelele ezingaphendulela umnotho ukushisa ngokweqile, okudinga ukuthi kuthathwe ngokungathí sina. Kulindeleke ukuthi umfutho wokukhula ngokushesha komnotho kwikota yesine ngeke ushintshe. Ngokuphathelene nemboni ye-valve, kunezinto eziningi ezinomthelela, okufanele ukunakwa.
Njengamanje, izwe lami linesidingo esikhulu sokuvuselelwa kwe-valve nokuvuselelwa kobuchwepheshe. Ngemuva kweminyaka eminingi yokuhlola nokwenza imakethe, imboni yama-valve kufanele ibe yiphayona elinolwazi oluningi ekubambeni iqhaza ekwakhiweni. Ikakhulukazi ngokwethulwa kwenqubomgomo yoxhaso lokuthengwa kwamaveluvu ngonyaka we-2014, izinga lokufakwa kwevaluva ezweni lakithi likhuphuke ngokungazelelwe laya ezingeni elisha. I-China Valve Industry Association seyethule uhlelo lokuqala lokuguqulwa kwezobuchwepheshe embonini yemishini yezolimo esekelwa yizimali zezikweletu zikazwelonke ngo-2008, futhi kukholakala ukuthi ukwesekwa kwezezimali kuzwelonke kuzokwandiswa ngonyaka ozayo.
Ngokombono wesidingo sasekhaya, kunezinto eziningi ezinhle, ukusetshenziswa okuphezulu nokususwa kobuchwepheshe nemishini, kuvimbela ukungeniswa kobuchwepheshe obukhulukazi basekhaya obuthuthukise amakhono, kukhansele inqubomgomo yokukhululwa enteleni yemishini ephelele namasethi wemishini ephelele, ukusebenzisa intela izikhuthazi kanye nokukhululwa enteleni kwezinto ezisemqoka, nokusebenzisa izikhuthazi zentela eChina’s ama-valve asindayo wezimayini nama-valve wobunjiniyela. , Amathuluzi omshini, nemishini kaphethiloli. Ukwakhiwa kojantshi (kufaka phakathi ojantshi abahamba phambili) sekusheshisile. Utshalomali olumaphakathi ngonyaka ngo-2007-2010 luzodlula ama-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-300, kanti ukwakhiwa kwemigwaqo emisha yasemakhaya kuzotshala imali engaphezu kwama-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-400. , Imboni yemishini yesitimela izodlala indima enkulu ekushayeleni; ukuvala izimayini ezincane zamalahle nokwakha amaqembu amakhulu amalahle, kwakheka amaqembu amalahle angamathani ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-5-7, njll., kuzohlinzeka ngemakethe ebanzi yokwakhiwa kwamavalvu ezimayini nezimayini zamalahle. Ngaphezu kwalokho, ezimakethe zaphesheya kwezilwandle, ukuqhuma kokwakhiwa kwengqalasizinda e-Afrika, eNingizimu Melika, e-South Asia naseMpumalanga Yurophu sekuqalile, futhi indawo yezimakethe inkulu kakhulu. Lokhu kuzoba yimakethe esemqoka yezinkampani ezifuywayo ezizohlola phesheya kwezilwandle ngokuzayo.
Ngokombono wesidingo sangaphandle nokufakwa esikhundleni, iChina’Uhlelo lokwakhiwa kwamadolobha lusemaphethelweni, futhi ukwakhiwa kwamaphandle okusha kuyashesha. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo ye-valve yasekhaya yobunjiniyela yenze inqubekela phambili enkulu ngokuya ngekhwalithi nensizakalo, futhi ukubuyiselwa kwemikhiqizo yakwamanye amazwe kuqhubeka njalo. Ngakho-ke, kulindeleke ukuthi iminyaka emithathu yokuqala isazoba yisikhathi sokukhula ngokushesha kwesidingo samaphayiphu obunjiniyela.
Isikhathi Iposi: May-22-2021